Facebook gosipụtara iko iko eziokwu ya | Site na Linux
Cheedị ụwa ebe otu iko anya ọkụ ma mara mma dochie mkpa maka kọmputa ma ọ bụ smartphone. Igwe ndị a ga-enwe ike inwe mmetụta nke anụ ahụ na ndị enyi na ezinụlọ, n'agbanyeghị ebe ị ga-anọ n'ụwa, yana ọgụgụ isi na-enyere aka yana 3D ihe ọmụma bara ụba na mkpịsị aka gị.
Nke ka nke bụ na ha ga-ahapụ gị ka ị lelie anya elu ma nọrọ ụwa ugbu a karịa ịtụgharị uche gị na mpụta nke aka gị. Nke a bụ ngwaọrụ nke agaghị amanye gị ịhọrọ n'etiti ụwa n'ezie na ụwa dijitalụ ...
Nkà na ụzụ dị otú a agaghị abụ ngwaọrụ na-adịghị mma nke ga-eme ka ị pụọ n'ụwa n'ezie ma banye n'ime ụwa dijitalụ, kama ọ ga-eso onye ahụ rụọ ọrụ n'ụzọ na-ejikọta eziokwu abụọ ahụ na-enweghị mgbanwe nkwụsị.
“Ha kwesiri inwe ike ime ihe ichoro ka ha mee ma gwa gi ihe ichoro imata mgbe ichoro imata ya, otu ahu ka uche gi si aru oru: kekọrịta ihe omuma nke oma ma mee ihe mgbe ichoro. ma ghara ịbanye n'ụzọ ha n'ụzọ ọ bụla ọzọ, "ka FRL kwuru.
Onye isi sayensị Facebook, Michael Abrash kọwara que ụdị mmekọrịta a na teknụzụ bụ otu n’ime nsogbu kachasị sie ike imeri.
O kwuru na "mgbe niile" AR, ọ ga - abụ ihe nghọta, ihe ọ kpọrọ mgbatị ahụ. Ọ bụrụ na nke a mee, ọ na-ekwu, ndị na-eyi uwe amachaghị na ha na-eyi ugegbe ndị ahụ ka ha na ndị ọzọ na-emekọrịta ihe n'otu oge.
E nyere ihe atụ nke onye yi otu iko iko AR jikọtara ya na eriri aka ya dị nro. Ha na-abanye n'otu ụlọ ahịa kọfị na onye enyemaka na-akwadoghị na-ajụ ajụjụ ahụ, "you chọrọ ka m nye iwu ka onye America iri abụọ na abụọ?" Ọ ga - adị mkpa iji pịa iji mkpịsị aka gị họrọ ee ma ọ bụ ee. Nke a bụ ihe FRL kpọrọ proactive teknụzụ, kama ịmeghachi omume.
FRL gara n'ihu kọwaa na ozugbo a zụrụ kọfị ahụ ma onye ahụ anọdụ ala na tebụl, ha na-etinye uwe aka abụọ dị fechaa. A na-ahụ anya na-ahụ anya ozugbo site na iko, ya na kiiboodu mebere. "Pingde ihe dị ka amamịghe dị ka ịpị ihe na keyboard nkịtị ị nọ na mpịakọta, mana mkpọtụ kọfị na-eme ka o sie ike itinye uche," ka FRL kwuru. Ya mere, enwere mbelata mkpọtụ na teknụzụ, nke na-aghọta mkpa nke onye nọ na gburugburu ebe obibi.
Inye iwu na-enweghị teknụzụ dị oke iwekwuru FRL, ị na-arụ ọrụ na njiri aka nke dabeere na electromyography. Nke a nyochaa akara eletriki nke ahụ na-esite n’ọkpụkpụ azụ na aka, nke ga-achịkwa ọrụ nke ihe ndọtị dabere na nkwojiaka. "Ihe ngosi site na nkwojiaka doro anya na EMG nwere ike ịchọpụta mmegharị mkpịsị aka nke naanị otu milimita," ka FRL kwuru.
Chief Executive Mark Zuckerberg tụlere nke a na mkparịta ụka ya na Ozi ahụ na Mọnde. O kwuru na enwere ike iji teknụzụ a "teleport" ndị ọrụ n'ụlọ ma ọ bụ n'ọfịs ndị ọzọ, na-agbakwụnye na ọ kwenyere na teknụzụ nwere ike belata njem ma belata mmetụta nke okpomoku ụwa.
Zuckerberg kwuru, "Kama ịkpọ mmadụ ma ọ bụ nwee mkparịta ụka vidiyo, ị ga - ejide mkpịsị aka gị wee kpọọ telivishọn, ị nọ ọdụ ebe ahụ ma ha nọ n'ihe ndina ha, ọ na - adịkwa ka ọ ga - anọkọ ọnụ."
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » GNU / Linux » Facebook gosipụtara iko iko ya